टोयोटाको सबैभन्दा सानो इलेक्ट्रिक कार सी प्लस पोड लञ्च गर्दै, यस्ता छन् विशेषता ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
टोयोटाको सबैभन्दा सानो इलेक्ट्रिक कार सी प्लस पोड लञ्च गर्दै, यस्ता छन् विशेषता !
जापानी कार निर्माता कम्पनी टोयोटाले नयाँ सी प्लस पोड इलेक्ट्रिक दुई सिटर बीईभी हो जसलाई टोयोटाले मोबिलिटी विकल्पको रूपमा लन्च गर्ने बताएको छ ।
जापानी कार निर्माता कम्पनी टोयोटाको सबैभन्दा सानो इलेक्ट्रिक कार सी प्लस पोड हो । गत वर्ष देखि जापानी बजारमा उपलब्ध सो कार एक आकर्षक लुक र दमदार इलेक्ट्रिक मोटरसँगै सजिएको छ । यसको सीमित मोडल मात्र बिक्री गरिनेछ
कारमा पैदलयात्रीहरु र भीडभाड भएका क्षेत्रमा दुईपांग्रे सवारीहरुसँग टक्कर नहोस् भन्नाका लागि विशेष प्रकारको फिचर जडान गरिएको छ । सो कार छोटो दूरीको लागि डिजाइन गरिएको हो । पावरको लागि यसमा ९.०६ केडब्ल्यु लिथियम आयोन ब्याट्री समावेश गरिएको छ । यसको मोटरले १२ एचपीको अधिकतम पावर र ५६ एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ ।
सिंगल चार्जमा १५० किलोमिटर
कम्पनीले सी प्लस पोड कार फुल चार्जमा १५० किलोमिटरको रेन्ज दिने दावी गरेको छ । २०० भी/१६ एम्पियर पावर सप्लाईको मदतले सो कार ५ घण्टामा फुल चार्ज गर्न सक्ने साथै १०० भी÷६ एम्पियर स्ट्यान्डर्ड पावर सप्लाईको मदतले १६ घण्टामा फुल चार्ज गर्न सक्ने जानकारी दिइएको छ ।
दुई जनाको लागि बस्ने व्यवस्था
सो कारको आकार धेरै सानो छ । सो कारको कुल वजन ६९० किलोग्राम रहेको छ । यसको लम्बाई २४९० एमएम, चौडाई १२९० एमएम र उचाई १५५० एमएम रहेको छ । सी प्लस पोड कारमा दुई जनाको लागि मात्र बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस कारको वजन कम राख्नका लागि एक्सटेरियर प्यानल प्लास्टिकबाट बनाइएको छ ।
टोयोटाले सी प्लस पोड दुई भेरिएन्ट एक्स ट्रिम र जी ट्रिम भेरिएन्टमा लन्च गरेको छ । यसको एक्स भेरिएन्टको मूल्य जापानी बजारमा करिव २० लाख र जी ट्रिम भेरिएन्टको मूल्य यो भन्दा केही हजार रुपैयाँले मात्र बढी छ । नेपाल अटो
प्रकाशित मिति: Sep 7, 2021
नेपाली बजारमा भित्रियो दुहानको थ्री-ह्विलर स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कुटर, यस्ता छन् बिशेषता!
चीनको विश्व प्रसिद्ध थ्री–ह्विलर स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कुटर नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । दुहान ब्रान्डको सो
टीभीएसले अपाचे आरटीआर १६५ आरपी बजारमा ल्याउदै
टीभीएस मोटर्स कम्पनीले अपाचे सिरिजमा नयाँ बाइक टीभीएस अपाचे आरटीआर १६५ आरपी बजारमा ल्याउने भएको
नेपाली बजारमा हुन्डाईको नयाँ टुसान भयो लन्च, मूल्य ८९ लाख ९६ हजार !
नेपाली बजारमा औपचारिक रुपमा हुन्डाईको नयाँ टुसान लन्च भएको छ । नेपालका लागि हुन्डाईको आधिकारिक
आईफोन निर्माता कम्पनी एप्पलको इलेक्ट्रिक कार आउँदै
आईफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले अब अटोमोबाइलमा डेब्यू गर्ने भएको छ । यतिबेला एप्पलको प्रोजेक्ट टाइटनको